Maxkamada sare oo go’aamisay in fadhiyada gaarka ah ee baarlamaanka aan la hor istaagi karin – The Voice of Northeastern Kenya
Maxkamada sare oo go’aamisay in fadhiyada gaarka ah ee baarlamaanka aan la hor istaagi karin
Isbeheysiga mucaradka ee cord ayanan ku guuleysanin dacwadii ay shalay maxkmada u gudbiyeen kadib markii ay xildhibaanada jubilee ansaxiyeen isbedel lagu sameynayay shuruucda doorshooyinka.
Mucaradka ayaa rabay in ay maxkamada soo saarto amar baarlamamanka u diidayo in uu yeesho fadhiya kale oo gaar ah balse garsoore George Odunga oo kiiskan dhageystay ayaa xusay in aynan u muuqanin wax sabab ah oo amarkaasi lagu bixin karo.
Hasa ahaate baarlamaanka dalka oo ay garabka mucaradka dacwad ka gudbiyeen ayanan maxkamada ku sugneyn ama xiligaas la matalin.
Senetarka countiga Siaya James Orengo, oo isbeheysiga Cord u doodayay ayaa xusay in fadhiga ay xidhibaanada yeeshen uu ahaa mid sharci daro ah maadama anan dadweynaha laga qeyb gelinin halka sido kale uu ka soo horjeedo xeerarka u dejisan golaha qaran ee baarlamaanka.
Xeer ilaaliyaha guud Prof Githu Muigai ayaa dhankiisa sheegay in aysan jirin wax sharci ah oo laga tallabsaday .
Dhanka kale maxakamada sare ayaa gudiga qaran ee dhulka ee NLC ka hor istaagtay in uu xaliyo muran ku saabsan cida dhabta ah ee iska leh guriyo ku yaalo xaafada Parklands ee magaaladatani Nairobi oo dhawaan qoys deganaa laga saaray .
← Dowlada oo amar ku bixisay in la xiro shirakada sida gaarka ah loo leeyahay ee bixiya adeegyada amniga oo aan shaqalaha mushar siinin
Boqolaal caruur ah oo dalka ku nool oo la sheegay in ay u dhintaan cuduro laga hortagi karo →